Eskisehir Ankara Tikidhada Xawaaraha Sare ee Tareenka Qiimayaasha iyo Jadwalka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraEskisehir Ankara High Speed ​​Train Tilmaamaha Tartanka iyo Jadwalka
12 / 07 / 2019 06 Ankara, 26 Eskisehir, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, TURKEY
Gaadiidka TCDD wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isticmaasho wakhtiga u dhaxeeya magaalooyinka leh xawaaraha sare iyo tareenada tayo sare leh. Eskişehir iyo Ankara, oo ku yaala magaalooyinkaas, isticmaal tareenka xawaare sare leh si firfircoon oo firfircoon, khaasatan taniyo laba magaalo oo waaweyn oo ay leeyihiin dad badan. Gaar ahaan waxay tixgelineysaa awooda arday ee Eskisehir iyo Ankara, nidaamkani waa mid aad u faa'iido leh oo waqti-ku-badbaadinaya ardayda. Tareenka Xawaaraha Sare ee Eskişehir-Ankara Tani waa mid ka mid ah joogsiyada Iskuulka Eskisehir-Istanbul-Ankara. Waxa suurtogal ah in rakaabku ay wadajir u sameeyaan safarada 5 wadar ahaan. Khadka Tareenka Xawaaraha Sare ee Eskisehir-Ankara, oo ah mid ka mid ah duulimaadka 6, ayaa maalin walba diyaariya duulimaadyada 13. Tan iyo waqtigani waa muddo gaaban, ma jirto wax xayawaan cunto ah. Tan iyo tareenada tareenadu ku yaalaan magaalada, waqtigan waxay dadka rakaabka siiyaan wax aad u macquul ah. Si fudud ayaad u heli kartaa basaska magaalada iyo wixii kale. rakaabku waxay u wareejin karaan ujeedkooda gaadiidka. Socdaalka wuxuu qaadanayaa celcelis ahaan saacadaha 1,5.
Nooc kasta oo ah baahida rakaabka ee tareenka ayaa la tixgeliyey waxana loogu talagalay in lagu codsado qof walba oo leh rakaab sidey oo leh heerar kala duwan. Tareenka waxaa ku jira kuraasta Pulman Business iyo Pulman. Rakaabka waxay iibsan karaan tigidhada nooc kasta oo internetka ah. Iyada oo habka lagu iibsado tigidhada internetka, oo ah mid ka mid ah tasiilaadka loo bixiyo rakaabka TCDD gaadiidka, waxaad dooran kartaa nooca gaari-gaaga ah ee online-ka ah, go'aanso goobtaada iyo dhameystirida habka iibka tikidhada adiga oo bixinaya qiimaha tikidhada, iyadoon loo eegin waqtiga iyo goobta.
Imisa Saacadood Oo Laga Heli Karo Tareenka Xawaaraha Sare Eskişehir ilaa Ankara?
Tareenka xawaare sare leh ee Eskisehir ilaa Ankara wuxuu u dhaxeeyaa 1,5 iyo Eskisehir ilaa Ankara. Tareenka wuxuu ka bilaabmayaa safarkii ugu horeeyay ee Eskisehir oo ku yaal 06.20 wuxuuna bilaabayaa safarkiisii ​​ugu dambeysay ee 21.10. Hoos waxaa ku qoran jadwal faahfaahsan waqtiyada safarka tareenka.
Maya Ka bixitaan Eskisehir Polatli ACCESS Ankara Arrintani waqtiga
Eskisehir-Ankara Xarumaha Xawaaraha Sare Heerka Sare
Qiimaha Tikidhada Eskisehir-Ankara Tareenka Xawaaraha Sare
Qiimaha tikidhada Eskişehir-Ankara YHT wuxuu u qaybsan yahay laba tigidh oo caadi ah iyo tikidh dabacsan. Rakaabka waxay tikidhada ka iibsan karaan baabuur kasta. Isla mar ahaantaana, marka loo eego da'da iyo kooxaha shaqada ee rakaabka, Gaadiidka TCDD wuxuu bixiyaa qiimo dhimis tikidhadooda. Rakaabka ayaa bixiya 43,50 TL oo loogu talagalay Pulman Business iyo 30 TL oo loogu talagalay tigidhka dhaqaale ee Pulman.
Qiimaha tikidhada kubada cagta ee Eskişehir-Ankara way kala duwan yihiin iyadoo la eegayo noocyada gawaarida ee rakaabka doonayaan inay iibsadaan tikidhada iyo da'da iyo shaqooyinka kooxeed ee ay ku xiran yihiin. Celcelis ahaan, qiimaha tikidhadu way kala duwan yihiin 24 TL iyo 50 TL. Rakaabka gaadiidka ee TCDD waxaa la siiyaa qiime dhimis iyadoo ku xiran tahay da'da iyo kooxaha shaqaynta sidii heer caadi ah.
Dadka xaq u leh tikidhada bilaashka ah waxay ka kooban yihiin carruurta da'doodu u dhaxayso 0-6, kuwa wata dagaalyahanada iyo qaraabada koowaad, dadka aadka u naafo ah, ciyaartoyda qaranka iyo dadka qaraabada koowaad ah.
Rakaabka 20, dhallinyarada da'doodu tahay 13-26, macallimiin ay ansixiyeen MoNE (akadeemiyada jaamacadaha ama kuleejada, iwm.), Muwaadiniinta da'doodu tahay 60-64, xubnaha kooxda helaya tikidhada saxaafadda, xubno ka tirsan Ciidammada Xoogga Turka iyo wareega wareega wuxuu khuseeyaa rakaabka qaada tikidhadooda ka soo baxa isla rugtaas.
Eskisehir Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara
Eskisehir Ankara Waqtiga Xawaaraha Sare
Eskişehir-Ankara Saacadaha Korontada Sare